Okay Linn – ဘုန်းကြီးတွေကို မီးရှို့နေတာ တပ်မတော်ပါ ခင်ဗျား | MoeMaKa Burmese News & Media
Okay Linn – ဘုန်းကြီးတွေကို မီးရှို့နေတာ တပ်မတော်ပါ ခင်ဗျား
ကာတွန်း အိုကေလင်း –
“တိဘက်က ဘုန်းတော်ကြီးတွေလို မိမိကိုယ်ကိုမိမိ မီးရှို့ဆန္ဒပြနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျား။
ကြေးနီတောင်စီမံကိန်းသပိတ်ကို လုံထိန်းတွေက ဗုံးတွေပစ်ပြီး ဖြိုခွင်းလို့ မီးကျွမ်းလောင်ခံနေရတဲ့ မြန်မာသံဃာတော်တွေပါ။
အလွန်အကျည်းတန်တဲ့ နိုင်ငံဆိုတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ကြရပါပြီ ခင်ဗျား။”
2 Responses to Okay Linn – ဘုန်းကြီးတွေကို မီးရှို့နေတာ တပ်မတော်ပါ ခင်ဗျား
tane sayar on November 30, 2012 at 3:21 pm
အကြောင်တွေ၊ တပ်မတော်က ရှို့တာလား၊ ရဲတပ်ဖွဲ့က ရှို့တာလားတာတောင် မသိဘူးလား၊ ဒါနဲ့များ မီဒီယာလုပ်နေသေးတယ်၊ စောက်ရူးတွေ။
pho cho on December 2, 2012 at 6:46 am
Okay Linn means riot police backed by army. You should realize that.
Okay Linn is quite right.